Soo Dhaweyntii Afhayeenka Madaxweynaha Mudane Xuseen Xuubsireed
:::MAQAALKII CALI YARE:::
GUN IYO GAAL-BA WAA FARXEEN GOBI-NA GEERI WAA TAQAAN: Sahan Tirokoob...
Sen. Coleman oo la gudoonsiiyey biladda "Saaxiibka Soomaalida" Akhri
:: SOM: HUMANITARIAN CRISIS
:: Letter From Coleman
:: Letter to Contact Group
:Fear and Cries of Army Brutality
Halkee ayey ku danbeysay Xisbiyadii Siyaasadeed ee Puntland laga dhisi lahaa?.. Akhri
Siilaanyo ha inoo dambeeyo ee wersheddii sibidhka ka warran wasiir: Qore: C/lahi C. Cige
Qaabiilba Haabiil Markuu Qoonsaduu Dilay:- Qabriga Haabiil Sidee U Eeg Yahay?... Akhri
Xafald si qurux badan loo soo agaasimey ayaa waxa ay ka dhacdey badhtamaha magaalada Minneapolis, Minnesota. Xafladaas ayaa waxa lagu soo dhaweynayey afhayeenka madaxweynaha, mudane Hussen Xubsireed. Xafladaas ayaa waxa isugu yimid dadka badan 300 boqol oo qofood oo isigu jirey qaraabada Xuubsireed, masuuliyiin ka kala socdey xafiisyada dowlada, hooyooyin, culumaa’udiin, ardey, macalimiin, aqoon ayahano, siyaasiyiin, iyo fanaaniin.
Waxa xafladaas soo qaban qaabiyey ururka haweenku ay leeyihiin ee gobolka Minnesota, Women Civil War Survivors. Xafladaas ayaa sidoo kale waxa ka qayb galey Safiirka u fadhiya Ethiopia Mareynkanka oo isagu kala hadley dadweynihii isugu yimid xaflada dhinaca telefoonka. Xafldaas ayaa waxa looga yimid meelo ka baxsan Minnesota sida Ohio, California, iyo Rochester Minnesota. Xafldaas oo ay wacdaro ka dhigeen fanaaniinta Minnesota oo halkaas ku soo bandhigey riwaayad uu Sangub sameeyey intii uu shirku ka socday xamar, iyagoo markaas fanaaniintu ay ku casuumeen in ay ku soo dhaweeyaan afhayeenka Madaxweynaha mudane Xuubsireed.
Sidoo kale waxa hadalo qiimo kale ka soo jeediyey siyaasiyiinta reer Minnesota, indheer garadka oo iyaguna ka Hadley arimaha ay Soomaaliya hada ku jirto iyo side ay uga bixi laheyd. Ugu dambeyntii ayaa waxa hadlaka ku soo gabagabeeyey Mudane, Xuubsireed oo ka Hadley marxaladihii uu la kulmey intii uu shaqadiisa gudanayey ee uu joogey Soomaaliya iyo in uu diyaar u yahay in uu noqdo oo uu hurayo naftyiisa sidii Soomaaliya loogu soo dabaali lahaa midnimo, nabad, iyo dib udhisid dhamaan wadanka oo dhan.
Hadaba hadii aad dooneysid sawiradii xaflada oo dhan halkan ka daawo. http://www.insideminnesota.org/images.html
Abdimalik Askar, Somali Media